Ganesh Rakh: Dhaqtar lacag la’aan ku dhaliya haweeneydii gabar dhasha | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ganesh Rakh: Dhaqtar lacag la’aan ku dhaliya haweeneydii gabar dhasha
Ganesh Rakh: Dhaqtar lacag la’aan ku dhaliya haweeneydii gabar dhasha
Posted by: radio himilo December 25, 2016
Pune, India – Dr. Ganesh Rakh wuxuu ugu yeeraa biirin cusub oo ku aadan kor u qaadista tirada dhalmada dhallaanka dhedigta ah gudaha dal caadooyinka dhaqameed ee dadyowgiisu aaminsan yihiin in liic kusii wado tirada gabdhaha oo aad uga sii yaraaneysa marka lala barbar-dhigo tirada wiilasha dhalanaya.
Sanadkii 1961, 976-dii gabdhood oo da’da 7-jirka ka hooseeyaba 1000 ayaa u dhignaa, marka loo eego tira-koobkii ugu danbeeyey ee lasii daayay sanadkii 2011 – tiradaas waxay hoos isku dhintay ilaa 914.
Dr. Rakh, kaas oo isbitaal yar oo ku yaal galbeedka Hindiya ee Pune ka howl bilaabay sanadkii 2007, wuxuu sheegay in mar kasta oo ay u timaado haweeney xaamilo ah: iyada iyo dhamaan qoysaskeeda waxay ku imaanayeen rajo ah inay gabadhu dhali doonto dhal wiil ah.
“Caqabadda ugu weyn ee dhaqtarka wajahdaa marar waa inuu xigto ku war-geliyo in bukaankoodu dhintay. Aniga ahaan, tan waxaa iila mid ahaa inaan qoysaska ku iraahdo gabadhiinnu waxay dhashay dhal dhedig ah,” ayuu yiri.
“Way dabaal-degi oo ay wada cuni macmacaan haddii dhal wiil loo dhalo, hayeeshe haddii dhal gabar loo dhalo, xigtadu waxay iskaga tagaan isbitaalka: hooyaduna way murugoon, aad bayna u niyad jabayaan.”
“Qaar badan ayaa ii sheegay inay dhalmada kahor galeen baaris oo ay ku ogaanayaan cunugga dhalanaya inuu wiil yahay. Runtii aad ayaan ula yaabay maadaama aan xaaladahan oo ogaal ku ahaan jirin: marar qaar xittaa waxay u tagaan fiqi-buraale si uu ugu faaliyo waxay gabadhoodu dhali rabto.”
Ol’oleeyayaashu waxay ficilkan la mitaaleen xasuuq iyo gaboodfal, halka ra’iisul wasaare hore Manmohan Singh uu ku qeexay “fadeexo qaran – isaga oo ku baaqay baaq ka dhan ah badbaadinta gabdhaha Hinduuga ah ee ku nool Hindiya.
Sanadkii 2012, Dr. Rakesh wuxuu bilaabay kaalintiisa gaarka ah ee ol’olaha ka dhanka ah badbaadinta gabdhaha.
“Waxaan go’aansaday inaan lacag ka qaadanin hooyadii dhasha dhal gabar ah. Sidoo kale, maadaama dhalashada wiilasha aalaaba loo dabaal-dego, waxaan go’aansannay inaan sidoo kale u dabaal-degno dhalashada gabdhaha,” ayuu yiri.
Afartii sano taniyo markii uu bilaabay ol’olihiisa, 464 gabdhood ayaa lagu dhalay isbitaalkiisa mana ka qaadin wax lacag ah waalidkii dhalay.
Qoyska Dr. Rakesh ayaa la garab istaagay taageero – iyaga oo, in kasta oo lacagtiisa gaarka ah ay kaga baxayso joogteynta mashruuciisa, hadana ku bogaadiyay in gacan ka geystaan mashruuciisa.
Maanta, dadaalkiisu wuxuu dhalay miro – wasiirro iyo saraakiil dowladda ka socta ayaa qiimeeyey doorkiisa waliba xidigga sare ee Bollywood Amitabh Bachchan ayaa ku tilmaamay ‘geesi dhab ah.’
“Waxaan bilaabay wax-yar. Mana aan ogeyn in sidaan loo qadarin doono,” ayuu yiri – isaga oo intaas kusii daray, “hayeeshe mararka qaar walxaha yaryar ayaa saameyn wayn ku yeesha quluubta bulshada.”
Bilihii dhawaa, wuxuu la xiriiray dhaqaatiirta dalka isaga oo weydiisanaya inay ugu yaraan hal haweeney ah lacag la’aan ku dhaliyaan hadday gabar dhasho. Wuxuu tilmaamay inuu helay balan-qaadyo taageero leh.
Wuxuu sidoo kale jidadka magaalada Pune ula ban-baxay ol’ole cusub oo bulshada loogu sheegayo in gabadhu ay u qaalisan tahay sida wiilka.
“Waxaan doonaya inaan badalo fiirada liidata ee laga qabo dhal gabar.”
Previous: Kaalinta nalalka ileyska qoraxda ku shaqeeya iyo daryeel la’aanta heysata
Next: Jack Wilshere oo ka walaacsan mustaqbalkiisa Arsenal